HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ကြေးစားဖြစ်ပါသည် ဟန်ချက်ညီဖိအား Steam ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်ပို့စုစုပေါင်းပမာဏနှင့် ပတ်သက်. 1000 million USD ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းများအတွက်ကွက်လပ်၌ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာအတွေ့အကြုံတွေကိုကျနော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာပထမဦးဆုံးလိုင်း၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာကြပြီ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားနေသူကတည်းကကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်မှုကစျေးနှုန်း & အရည်အသွေးကဖောက်သည်ကျေနပ်မှုမောင်းနှင်နှစ်ပေါင်းကျော & စဉ်အကြှနျုပျတို့ခွ၌ထားကြ၏။
ပုံစံ - CAST IRON No. S50、S50F
သံမဏိဖိအားထိန်းညှိမှု DSC CAST IRON
●MOP 17K x ကို 230̊ဂ..
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/balanced-pressure-steam-trap-1.html